मैले देखेंको इजरायल « Anumodan National Daily
मैले देखेंको इजरायल
प्रकाशित मिति : १९ श्रावण २०७५, शनिबार ०९:०७
कहिले अव्यवस्था, कहिले राजनीति उथलपुथल, कहिले द्वन्द्व त सँधैको राजनीतिक अकर्मन्यता । देश र जनताका लागि भनिएको राजनीति जिम्मेवार बन्न सकेन । वफादार र दूरदर्शी नेतृत्व हामीले पाएनौं ।
हुनेले भएको गह्रो बाँझै छोडे । कामकाजीले श्रमको मुल्य पाएनन् । बिचौलियाको बदमासीमा जुनसुकै सरकार रमिते बने । इलम, रोजगार र स्वरोजगारका बाटाहरु कहिल्यै चौडा बनेनन् ।
अनि ‘सुन्दर सपना र उज्जवल भविष्य भनेकै विदेश हो’ भन्ने मानसिकताले नेपाली युवालाई गाँज्दै लग्यो । अरु नेपालीको मानसिकता र सोंच झैं मलाई पनि दिनरात विदेशको सपना आउन थाल्यो । त्यहि विदेश सपनाको मीठो कल्पनामा दिनरात मग्न हुँदै अनगिन्ती सपनाको थ्रुपो लिएर अन्ततः एसियाको एक विकशित र आधुनिक मुलुक इजरायल आइपुगेँ ।
इजरायल पुगेको पनि एक दशकभन्दा बढी भइसकेछ । यतिलामो समयक्रमको इजरायल बसाइँमा मैले स्वदेशमा हुँदा देखेका सपना कति साकार भए, कति भएनन् ? आत्मसमीक्षाकै विषय होला । तर, यस क्रममा मैले अनुभूत गरेका अनगिन्ती भोगाईं छन् – कति सधैं स्मरण गरिरहुँ जस्ता, कति कहिल्यै नसम्झुँ जस्ता ।
भनिन्छ– मानिसको जन्मदेखि मृत्युसम्मको अवधि बीचको समय नै जीवनको सफलता र असफलताको कहानी हो । दार्श्निकदेखि साहित्यकारहरुले मानव जीवनलाई अनेक ढंगले परिभाषित गरेका छन् । संसारलाई नाट्यशाला भनेका छन् । मान्छेलाई रंगमञ्चको पात्र । मान्छे फगत रंगमञ्चको कलाकार मात्रै हो र उसलाई नचाउने निर्देशक अरु नै कोही छ । जसलाई विधाता भन्छौँ, हामी । हिन्दू दर्शनले भन्छ– तिम्रो सबै कर्म र फलको पहिल्य नै तय छ बस् तिमी कर्म गरिराख ।
घरपरिवार, आफन्त, नातागोता, इष्टमित्र, बन्धुबान्धवबाट निकै टाढा छु । गाउँघरको भाषामा, ‘सात समुद्रपारी’ । पराइँ मुलुकमा एक्लोपनले कहिलेकाँही चिमोट्छ । उराठ लाग्छ । तैपनि आफ्नो दायित्वबोध हुन्छ, अनि कर्ममा तल्लीन हुन्छु । संघर्षमय जीवनको यात्रामा असफलताबाट निरास र सफलतामा हौसिने काम भने मबाट कहिल्यै भएन । हुने पनि छैन् ।
कहिलेकाँही लाग्छ– सिंगो जीवन ‘पाहुना वा यात्रा’ त हो । त्यो यात्राभित्र पनि पत्रपत्र परेका धेरै यात्रा हुँदा रहेछन् । पत्रपत्र परेको यात्रामा पनि खण्डखण्डमा चुनौतीको चाङ । जीवन मैले सोचेजस्तै हो कि ? भावीले लेखेको पुरा गर्ने कालखण्ड मात्रै ? जति सोच्यो, उत्ति गाह्रो । बुझ्यो, झन् गाह्रो । स्वदेशबाट पराइँ मुलुकमा एकोहोरो काममा व्यस्त रहँदा, फुर्सदका क्षणमा वा राती एक्लै ओच्छ्यानमा सुत्ने उपक्रम गरिरहँदा यस्तै, यस्तै अनगिन्ती लहडले मन बरालिन थाल्छ ।
जीवन आफ्नै हो । तर, के सबैलाई सोचेको वा चाहेको पुरा हुन्छ ? हामी बबुराहरू, ठूला कल्पना गर्छौ, धेरै चाहना राख्छौं । फर्केर हेर्दा पाउँछौं– सोचेको भन्दा नसोचेको पो बढि भोगिएछ । कहिलेकाँही म सोच्छु– जे राम्रो सोचेकी थिए, भएन । नसोचेको भोगे, भोगिरहेकी छु । सायद जीवनको एउटा पाटो यही हो ? सोचेजस्तो र चाहेजस्तो नहुने भनेकै जीवनको परिभाषा हो कि ? आफैले आफूलाई सम्झाउँछु ।
मेरो प्रिय माटो र जन्मभूमिको सम्झना चुम्बकीय बनिदिन्छ । त्यही शक्तिले मेरो मनलाई लगातार आफूतिर तानिरहेको हुन्छ । कर्मथलोमा बसालेको रहनसहनको पनि माया लाग्छ, लाग्नु पनि स्वभाविक हो । कर्मथलोमा मैले बिताएका सुखददुखद हरेक पल मेरा अबिराम र अमिट छाप हुन् । हरेक पाइलासँगै जीवनको अन्तिम घडीसम्म यी यसरी नै मसँग आइरहनेछन् । टाँसिइरहनेछन्, मुटुको अन्तस्करणमा । म यही चाहन्छु पनि र भगवानसँग प्रार्थना गर्छु ।
जीवन आरोह अबरोह न हो । यो बाँच्ने क्रममा यात्राहरूको लामो शृंखला बन्छ । अनन्तः भोगाइँको थुप्रो लागिदिन्छ । मेरो पनि छ । विदेशमा मैले इजरायल रोजे । यहाँ मेरो जीवनको उर्जावान उमेरका एक दशक बिताएँ ।
इजरायल, मध्यपूर्वमा अवस्थित सुन्दर पर्यटकीय देश । विदेशी कामदारहरूका लागि सुरक्षित र कामको उचित सम्मान हुने मुलुक । सुनेजस्तै भोगाइँमा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै । त्यसैले विश्वभरका नागरिकको एक प्रमुख गन्तव्यस्थल बनेको छ, यो । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालीको पनि उपस्थिति बाक्लिँदो छ । अहिले इजरायलमा पाँच, छ हजारको हाराहारीमा नेपाली कार्यरत छन् । तथ्यांकले यही देखाउँछ । इजरायल आउनेहरू विशेषगरि केयरगिभर (सुसारे) र कृषि पेसामा आवद्ध छन् । उल्लेख्य के छ भने– इजरायलमा नेपाली महिला कामदारको संख्या पुरुषको तुलनामा झण्डै दोब्बर छ ।
इजरायल सानो क्षेत्रफलको मुलुक हो । अर्थात नेपालभन्दा झण्डै सात गुणा सानो छ यो देश । नेपालको क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार एक ८१ वर्ग किलोमिटर छ भने इजरायलको २२ हजार ७२ वर्ग किलोमिटर मात्रै ।
तर, विकास, सभ्यता र समृद्धिका दृष्टिले इजरायल विश्वकै अग्रणी मुलुकमा दर्ज भएको छ । राष्ट्रियता र पहिचानका लागि निकै संवेदनशील र सजग हुन्छन् इजरायलीहरू । इजरायल आधुनिक सूचना प्रणालीसँग अभ्यस्त छ ।
इजरायल पुगेका हामी नेपाली एउटै घरपरिवारका झैं लाग्छौं । आफ्नो देश, गाउँघर छोडेर विदेशिएकाहरू एकले अर्कोलाई भेट्दा अपार खुसी लाग्छ, आफ्नोपन अनुभूत हुन्छ । आत्मियता जाग्छ । हामी इजरायलमा रहेका प्रत्येक नेपालीलाई नेपाली हुनुको गौरव हुन्छ । आफ्नो भाषा, कला, संस्कृति र साहित्यप्रति गर्व गर्छौँ । र, हामी इजरायलमा रहेका नेपाली हाम्रो मौलिक कलासंस्कृति, भाषा, साहित्यको संवद्र्धनका लागि आफ्नो तर्फबाट हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छौँ ।
इजरायलमा नेपाली कामदारको ठूलो माग छ । तर, पछिल्ला दिनमा इजरायल सरकारले नेपाली कामदारका लागि बाटो बन्द गरेको छ । केही वर्ष पहिले जि टु जि अर्थात सरकारदेखि सरकारबाट नेपाली कामदार ल्याउने इजरायल र नेपालबीच सहमति भएको थियो । तर त्यो पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन ।
इजरायलको बसाइँले हामी सबै नेपालीबीच सबैखाले भेदभाव बिर्साएको छ । बैमनस्यता मेटाएको छ । यहाँ को पहाडी ? को मधेसी ? को बाहुन ? को दलित ? कुनै भेदभाव हुँदैन । यहाँ सबै नेपाली मात्रै छौं । इजरायल बसाइँले मलाई दिएको सबैभन्दा ठूलो उपहार यही हो ।
इजरायल आउनुअघि यो मुलुकबारे धेरै जानकारी थिएन । यहाँ आइपुगेपछि थाहा भयो– इजरायलसँग युद्धको घाउ र दुःखको लामो शृंखला भोगेको इतिहास रहेछ । छिमेकी मुलुक प्यालेस्टाइनसँगको दशकौँदेखिको युद्ध अझैं जारी छ ।
युद्ध र युद्धको रापतापबाट आफ्नो अस्तित्व जोगाउँदै आर्थिक समृद्धिको निरन्तर यात्रालाई अविश्रान्त अघि बढाइरहेको मुलुक रहेछ, इजरायल । विश्वभरी इजरायल र इजरायलीको विशेष स्थान छ । महत्व छ । इजरायलमा रहेका पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण इजरायली सरकारको सधैं प्राथमिकताको विषय बन्छ । संसारकै सबैभन्दा होचो मृतसागर (डेड सी) को सौन्दर्यले इजरायलले वर्षौवर्षदेखि भोगेको युद्धको कठोर घाउमा मल्हम लगाएको छ ।
दशकौंदेखि युद्धको चपेटामा परेको भएर होला इजरायल सरकारले १८ वर्ष पुगेका हरेक इजरायली नागरिकलाई अनिवार्य सैन्य तालिम लिनुपर्ने प्रावधान बनाएको छ । सोही अनुसार आफ्ना नागरिकलाई सैन्य तालिम दिँदै आएको छ । यसले आम इजरायलीलाई युद्धका बेला कसरी आफू र अरुलाई सुक्षित हुने भन्नेबारे राम्रै ज्ञान दिएको छ ।
७४ दशमलव ८० प्रतिशत यहुदी, २० दशमलव ७५ प्रतिशत अरबी र ४ दशमलव ४५ प्रतिशत अन्य धर्मावलम्बी रहेको यो मुलुकको सरकारी भाषा हिब्रु हो । छिटपुटले अरबी प्रयोग गर्छन । अचम्मको कुरा यहाँका नागरिक (विशेषगरि यहुदीहरु) ले हरेक मध्यदिन शुक्रबारदेखि शनिबार साँझसम्म केहि काम नगर्ने यतिसम्म की सवारी साधन नचलाएर घरमै बस्ने तथा घरमा पनि टेलिभिजन, कम्प्युटर, मोवाइल, ग्यासचुलो नचलाई साझबिहान बेतकेनेसेत गएर पूजा गर्छन् । शनिबार साँझ ६ बजेपछि भने पुनः निरन्तर काममा ब्यस्त हुन्छन् ।
युद्धको अथाह पीडा भोगेर, झेलेर इजरायलले कसरी आर्थिक विकासको मुलमार्ग संरक्षित गरेको रहेछ ? भन्ने प्रत्यक्ष अनुभव गर्दा आफ्नै मुलुकको १२ वर्ष सशस्त्र माओवादी युद्ध र त्यसले सिर्जना गरेको विध्वंसको स्मरण हुन्छ । दशकौंसम्म युद्धमा होमिनु परेको इजरायलले कसरी आर्थिक समृद्धिलाई निरन्तरता दिन सक्यो ? नेपालले इजरायलबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।
मेरो मनमा हरेक दिन अनेक कुराले जन्म लिन्छन्, तर्क खेल्छन् । कतिपय विचारले आफैंलाई मख्ख पार्छ, कतिपय एकैछिनमा बिर्सु झैं लाग्छ । इजरायललाई युद्धको इतिहासले आर्थिक समृद्धिलाई सघायोभन्दा धेरैलाई अनौठौ लाग्छ होला । तर, ‘वार टुरिज्म’ का माध्यमबाट रातारात चम्किएको इजरायलबाट नेपालीले पनि केही सिक्ने कि ? नेपालमा पनि हजारौं सुन्दर र मनमोहक प्राकृतिक सम्पदा छन् । धार्मिक अनुष्ठान छन् । १२ वर्षसम्म झेलेको द्वन्द्वलाई पनि आर्थिक समृद्धिका लागि उपयोग गर्ने अवसर छ ।
इजरायलले आफ्नो देशको विकास अनुकरणीय रुपमा गरेको छ । संस्कृतिको जगेर्ना उस्तै छ । तेलअविभ, हाइफा, जेरुसेलम, तिबेरिया, गोलानहाइटलगायत ठाउँ बाह्रै महिना आन्तरिक र बाह्य पर्यटकले भरिभराउँ हुन्छन् ।
नेपालमा रहेका यस्ता अनगिन्ती पर्यटकीय स्थल तथा गन्तव्य सम्झेर मेरो मन बारम्बार चस्किने गर्छ । स्वर्गको टुक्राजस्तो हाम्रो देश नेपालमा पनि इजरायलीले जस्तै बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटक तान्न सके पर्यटनका माध्यमबाट चाँडै विकासको मुल फुटाउन सकिन्थ्यो । राज्य र हरेक नेपालीको दृढ इच्छाशक्ती र लगनशिलता मात्रै त आवश्यक छ ।
इजरायलले अहिले पनि ‘वार टुरिज्म’ बाट मनग्य आम्दानी गरिरहेको छ । हामीले युद्धलाई गुमाएको दुःखको इतिहासका रुपमा मात्र लियौँ । तर दुखद इतिहासलाई आम्दानीका रुपमा परिमार्जन गर्न सकिने कुरा इजरायलमा देखेँ, सिकेँ र बुझेँ ।
इजरायलका थुप्रै रोचक पक्ष छन् । इजरायलमा मुस्किलले १० प्रतिशत जनता मात्रै कृषि पेसामा संलग्न छन् । तर, इजरायल कृषि उपजमा आत्मनिर्भर छ । १० प्रतिशत मात्रै रहेका इजरायली किसानले आफ्नो मुलुकलाई कृषि उपजको निर्यातकर्ता समेत बनाएर विश्वलाई उदाहरण देखाएका छन् ।
हामीसँग बिडम्बना मात्रै छ । अहिले पनि ७५ प्रतिशत नेपाली जनता कृषिमा निर्भर छन् । तर उत्पानमा आधुनिकता छैन । बजार छैन । श्रमको सम्मान छैन । सकल राष्ट्रिय ग्रार्हस्थ उत्पादनको जम्मा ३० प्रतिशत हिस्सा मात्रै कृषि क्षेत्रले योगदान दिइरहेको बिडम्बनापूर्ण अवस्था छ । हरियो धनियादेखि वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँको फलफूल, तरकारी आयात गर्ने मुलुकका रूपमा कृषिप्रधान देश नेपाल चिनिन्छ । जनशक्ति निर्यात गर्ने देशका रुपमा नेपाल स्थापित भएको छ ।
विश्वकै अग्लो चुचुरो सगरमाथा हाम्रै देशमा छ । शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मेको देश नेपालै हो । विश्वकै दुलर्भ एकसिंगे गैंडाको एकमात्र बासस्थान हो नेपाल । सयौं प्राकृतिक गुफा, झरना, हिमाल, तालतलैया तथा कला र संस्कृतिले धनी भएर पनि हाम्रो पर्यटन क्षेत्र रुखो छ । जीर्ण छ । मौलाउन सकेको छैन । किन ?
किन मेरो मुलुक सधैं रेमिट्यान्सका भर परेको छ ? मलाई यसले सधैं रिंगाइ रहन्छ । र, यसलाई अब खरोरुपले बहसमा ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । अरु देशका सरकारले मरुभूमिलाई सुन्दर बगैंचा बनाएर पर्यटक तानिरहेका छन् । हामीसँग प्रशस्त पर्यटकीय स्थलहरू हुँदा पनि पर्यटक तान्न सकिरहेका छैनौं । नेपाल घुम्न चाहन्छु भन्ने पर्यटकलाई समेत हामीले नेपाल ल्याउन सकेका छैनौं ।
एकात्मक संसदीय गणतन्त्र व्यवस्था रहेको इजरायल मानव विकास सूचकांकमा विश्वभर १९ औं स्थानमा छ । यहाँको प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक सरदर ३७ हजार ३३० युएस डलर (स्रोत विश्व बैंकको प्रतिबेदन २०१६) रहेको छ । आयका हिसावले इजरायल विश्वभर २५ औं स्थानमा पर्छ ।
इजरायली प्रायः घुमघाम गर्न रुचाउँछन् । नेपाल इजरायलीका लागि प्रमुख पर्यटकीय गन्तब्य बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ । यसका लागि तत्काल नेपाल र इजरायलबीच सीधा हवाई सम्पर्क बढाउन सके पर्यटनका लागि नेपाल राम्रो गन्तब्य मुलुक हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
यात्रा जीवन हो, जीवन भनेकै यात्रा । जुन दिन यात्रा टुंगिन्छ, त्यो दिन नै जीवनको अन्तिम दिन हो । जीवनमा जति यात्रा गरिदोरहेछ, त्यति नै नयाँ अनुभव बटुल्ने मौका पनि पाइदोरहेछ । तसर्थ सबैमा सोचको विकास होस्, योजनाको विस्तार होस्, अनुकरणीय कुरा अनुसारको सँस्कार मिलोस् ।
(लेखकः मातृभूमिका लागि पर्वत सेवा समाज इजरायलका अध्यक्ष हुन् ।)